सूचना प्रविधि Archives - Page2of4- दैनिक
फेसबुकमा नक्कली एकाउन्ट बनाउन नमिल्ने
सूचना प्रविधि शुक्रबार १२ चैत, २०७२
एजेन्सी। फेसबुकले नयाँ फिचर ल्याउने भएको छ। यस फिचरमा अब कुनै पनि फेसबुक प्रयोगकर्ताले अर्को व्यक्तिको नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाउन सक्ने छैनन्। यस फिचर अन्तर्रगत कुनैव्यक्तिको फोटो प्रयोग गरेर नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाउन खोजेमा फोटो प्रयोग गरिएको व्यक्तिलाई जानकारी हुनेछ र कसैले तपाईको नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाउँदै छ भनी फेसबुकले नोटिफिकेशन पनि पठाउने छ। कुनै पनि […]
टेलिकमले ल्यायो नयाँ सामाजिक सन्जाल ‘मिट’
समाचार, सूचना प्रविधि सोमबार ०४ माघ, २०७२
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले नयाँ सामाजिक सन्जालकारूपमा ‘मिट’ सन्चालनमा ल्याएको छ ।लेख, तस्वीर, श्रव्य तथा दृश्यलाई एकार्कामा पठाउन सकिने सो सन्जालको टेलिकम भोजपुर प्रमुख रामकुमार माझीसँग सोमबार सूचना तथा सन्चारमन्त्री शेरधन राईले कुराकानी गरेर उद्घाटन गरे । सो सन्जालबाट कम्पनीका विभिन्न सेवाकाबारेमा ग्राहकसँगआवश्यक अन्तरक्रियासमेत गर्न सकिने छ । यसले कम्पनीका सेवाग्राहीकाबीचमा सामाजिक सम्बन्ध विकास गराउने उद्देश्य […]
एप्पलले गर्‍यो अाइफोनसँगै केही डिभाइस अपडेट
सूचना प्रविधि शुक्रबार २५ मङि्सर, २०७२
ऐजेन्सी । एप्पलले आईफोन, एप्पल टिभी, एप्पल वाच र म्याकबुकलाई अपडेट गरेको छ। यी सबै डिभाइसहरुमा नयाँ फिचरहरु अपडेट भएका छन्। अपडेटका साथै यी डिभाइसहरुमा रहेका समस्याहरु पनि समाधान भएका छन्। यस अपडेट पछि एप्पल वाचमा रहेको क्यालेंडरको समस्या पनि समाधान भएको छ। यस अघि क्यालेंडर इभेंटस्को अपडेटमा समस्या रहेको थियो। यसका सथै अब पावर […]
गुगलले सिध्याउँदैछ मान्छेको दिमाग
सूचना प्रविधि शनिबार ०७ कार्तिक, २०७२
मानिसमा बढ्दै गएको अधैर्यताले डिजिटल स्मरणहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसका कारण हामीहरु दैनिक जिवनका महत्वपूर्ण तथ्य तथा जानकारीका साथै प्रश्नहरुको उत्तरका लागि इनटरनेटमा भर पर्दै गएका छौँ अनि अर्कोतर्फ अनलाइनमा हेरेका र पढेका जानकारीहरु समेत छिटै भुल्न थालेका छौँ । एक अध्ययनले पनि मानिसको डिजिटल आशक्ति बढ्दै गएको देखाएको छ । जस अनुसार […]
नेपाल टेलिकमकाे IVR बाट रिचार्ज गर्ने नयाँ तरिका
सूचना प्रविधि आइतबार ०१ कार्तिक, २०७२
काठमाडौ । नेपाल टेलिकमले यही कार्तिक १ गतेदेखि अर्थात् आजदेखि IVR १४१२ मार्फत CRBT र CS system बाट कम्पनीका विभिन्न सेवाहरुको महसुल भुक्तानी तथा रिचार्ज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस नयाँ व्यवस्था अनुसार IVR (Interactive Voice Response) १४१२ मार्फत Third Party Recharge Service कम्पनीको NT Recharge Card मार्फत निम्न बमोजिमका सेवाहरुको लागि उपलब्ध गराइएको छ कम्पनीले […]
स्मार्टफोन किन्दा स्मार्टफोनकै मूल्य बराबरको ब्यालेन्स पाइने
सूचना प्रविधि बुधबार २७ असोज, २०७२
चाडपर्वकोे अवसरमा एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि स्मार्टफोन सेटसँग बन्डलिङ्ग गरेर आकर्षक सेवा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले विभिन्न मोडलका स्मार्टफोन खरिद गर्दा फोनको मूल्य बराबरकै बोनस ब्यालेन्स प्राप्त गर्नेछन् । अर्थात्, बन्डलिङ्ग सेवामा ग्राहकले स्मार्टफोनको मूल्य बोनसको रूपमा फिर्ता पाउनेछन् । यो सेवा अन्तर्गत ग्राहकले हुवावेका दुई मोडल, र माइक्रोम्याक्स तथा कर्लसको एक–एक […]
फेसबुकले म्यासेन्जर मार्फत यसरी कमाउनेछ पैसा
सूचना प्रविधि आइतबार १० असोज, २०७२
फेसुबकले आफ्नो च्याट गर्ने सेवा म्यासेन्जरबाट पैसा कमाउने सोच रहेको कुरा पहिले नै बताइसकेको छ। मानिसहरु र व्यवसायले एक अर्कालाई विज्ञापनमुक्त म्यासेजहरु पठाउन सम्भव बनाउने योजना रहेको फेसबुकका सिइओ मार्क जुकरवर्गले बताएका थिए। जब मानिस र व्यवसायवीच यसरी कुराकानी हुन सुरु हुन्छ तब फेसबुकले व्यापारबाट पैसा कमाउने उपायहरु खोज्ने बताइएको छ। फेसबुकका कार्यकारी एन्ड्रु वसवर्थले […]
एसएमएस डिलिट भएको कसरी फिर्ता ल्याउने ?
सूचना प्रविधि मङ्गलबार ०५ असोज, २०७२
यदी तपाईंले भुलवस कुनै महत्वपूर्ण एसएमएस मोबाइलबाट डिलिट गर्नुभयो भने आत्तिहाल्नु पर्दैन । त्यसलाई फिर्ता पाउन पनि सक्नुहुन्छ । एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा एक पटक डिलिट भएको एसएमएस फिर्ता गर्न सक्ने सुविधा छ । यसको सतप्रतिशत ग्यारेन्टी भने हुँदैन । तर प्रयास गर्दैमा के जान्छ ? कम्प्युटरमा कुनै पनि फाइल डिलिट गर्दा त्यो एउटा ट्र्यासमा गएर बस्छ […]
कुखुरा पहिले कि अण्डा ?
सूचना प्रविधि शुक्रबार २९ साउन, २०७२
एजेन्सी । दुनियाभर एउटा अनुत्तरित प्रश्न चर्चित छ, कुखुरा पहिले कि अण्डा ? यसको ठोस जवाफ त कसैसँग छैन । कसैले कुखुरा पहिले भन्छन्, कसैले अण्डा । तर, यही नै पहिले भन्ने ठोस प्रमाण कसैसँग हुँदैन र चुपचाप लाग्छन् । यही अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ वैज्ञानिकहरुले ठोस प्रमाणसहित पत्ता लगाएका छन् । सो प्रमाण अघि सार्दै वैज्ञानिकहरु […]
विन्डाेज १० अाजदेखि उपलब्ध, यस्ता छन् विशेषता
सूचना प्रविधि बुधबार १३ साउन, २०७२
माइक्रोसफ्ट कम्पनीले आफ्नो नयाँ अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज १० सार्वजनिक गरेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको र बहुप्रतिक्षित विन्डोज १० मा करोडौं विन्डोज प्रयोगकर्ताहरुले यो नयाँ अपरेटिङ सिस्टमलमई डाउनलोड गर्ने छन् भनी कम्पनीले ठुलो आशा बाकेकोे छ। विन्डोज १० सबैभन्दा पहिले कम्प्युटर त्यसपछि ट्याबलेट र अन्त्यमा स्मार्टफोनको लागि उपलब्ध हुनेछ। विन्डोज ७, ८ र ८.१ प्रयोगकर्ताहरुका […]